Who were Bengali, so called Rohingya?: နိုင်ငံတော်ဦးသျှောင်တွေ / နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဘာတွေလုပ်နေ
နိုင်ငံတော်ဦးသျှောင်တွေ / နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဘာတွေလုပ်နေ
အယောင်ဆောင်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပါသက်လို့ BBC ရဲ့မှားယွင်းစွာဖေါ်ပြမှုအပေါ် BBC အနေနဲ့ပြန်လည် တောင်းပန်ဖြေးရှင်းဖို့အရေးကို တိုင်းရင်းသားညီအကို မောင်နှမတွေ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးပမ်းပြီးပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စဟာပေါ့သေးသေး ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး (လူမျိုးရေးမှာတောင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့လူမျိုးရေး)။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာ ရွှေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အချုပ်သူတွေနဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ထိရောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကိုယ်တိုင် အဓိကနေရာကနေပြီး ဖြေရှင်းပေးရမှာပါ။ ရွှေမြန်မာပြည်က အတိုက်အခံပါတီတွေကကော BBC လုပ်သမျှ ထိုင်ကြည့်နေကြတာလား။ ဘာအတွက်အတိုက်အခံလုပ်နေကြတာလဲ ကိုယ်အာဏာရလာဖို့အတွက်လား၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ကောင်းစားဖို့အတွက်လား။ NLD တို့လိုအထိကရ အတိုက်အခံပါတီတွေကော ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ။ တကယ်လို့ BBC က NLD ဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီမဟုတ်ပါဘူး အလိမ်အညာ သက်သက်သာဖြစ်တယ်လုိ့ ကြော်ငြာရင်ကော NLD လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလား နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကကော ငြိမ်နေမလား။ ပါတီကိုထိတာမဟုတ်လို့ ငြိမ်နေကြတာလား။ ဘာအတွက်လုပ်နေကြတာလဲ။ ဘယ်သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတာလဲ။ မင်းတိုအာဏာရရေးသက်သက်လား။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခါရှိရှိ ရပ်တည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အသံလွှင့်ဌာန BBC အနေနဲ့ မိမိတို့မှားမိတဲ့အမှားကို သိက္ခါရှိသူများပီပီ ရဲရဲကြီး ပြန်လည်တောင်းပန် ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ် ဆိုတာကို NLD တို့၊ တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတို့က ဘာကြောင့်များ မတောင်းဆိုကြတာလဲ။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားအရေးက NLD တို့ တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တာလား။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေး ကိုလူတကာသိအောင် တင်ပြတဲ့သူဟာ အဲဒီလူမျိုး/နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းကို နောကျေနေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ BBC သတင်းထောက် Anna Joe က မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို အသုံးပြုပြီးတော့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်း ငွေကိုဖောင်းအောင်စားပြီး တလွဲစီတင်ပြထားတာကို နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူကြီးမင်းများ၊ နိုင်ငံတော်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်နေတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများ မမြင်ကြလို့လား မကြားကြလို့လား။ BBC ရဲ့လွဲမှားမှုဟာ ကုမ္ပဏီတခု လုပ်ငန်းခွင်တခုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့မှားတဲ့ အမှားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးတမျိုး နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး နဲ့ပါသက်ဆိုင်တဲ့ အမှားတခုပါ။ အသေးအမွှား လွဲမှာသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြီးကြီးကိုမှားယွင်းသွားတဲ့ မှားယွင်းမှုပါ။
သူတို့မှားမိတဲ့အမှားကို ရွှေမြန်မာပြည်ြကီး ကောင်းစားအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သာ မဆိုင်သလို အသာလေးရပ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ တခါမှမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အယောင်ဆောင် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ပြောင်းလဲရေးလားလို့ ရွှေမြန်မာအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ NLD အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံရေးပါတီ၊ တခြားနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကို မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ဦးသျှောင်တွေ အိပ်မောကျနေကြတာလား နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အာဏာအငွေ့အသက်ရလို့ မူးမေ့နေကြပြီလား။ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 9:38 AM
မျိုးစောင့်ဆိုတဲ့ ကုလား ခွေးမသားသူခိုးက လူပြန်ဟစ်နေသေးတယ်။စောက်ရှက်မရှိတဲ့ ကုလားတွေ..ဦးနှောက်တွေက ကလေးသာသာရယ်... အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးကုလားလို့ပြောတာ.... ရိုးရိုးကုလားမပြောနဲ့... ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးရှေ့မှာတပ်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာကုလားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တောင်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ကလေးကုလားစကားတွေပြောပြီး စောက်ရှက်ကင်းမဲ့နေတယ်
စောက်ကုလားမ နင်တို့ကများ မြန်မာကိုသူ
တောင်းစား လို့ပြောရင် နင်တို့လို ပြန်စရာ
နိုင်ငံလည်းမရှိ ဘဂ်လားက လည်းလက်မခံ ငရုပ်
သီးဆားဖြူးစားပြီး ရေသောက်နေရတဲ့ ခေါ်တော
ကုလားကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ လားကလီးလို့ခေါ်
မင်းတို့ ခေါ်တောမျိုးမဟုတ်ဘူးကွ လီးကုလား
တွေရဲ့ ဟို jone ကုလား နဲ့ မျိုးစောင့်ဆိုတဲ့
ကောင် မင်းတို့ဖင်ကို ၀က်ဆီသုတ်ထား။
အို ဘင်ဂါလီအနွယ်ဝင် ရိုဟင်ဂျာအပေါင်းတို့
နေစရာမရှိသော် ပင်လယ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်
နှင့်အတူ နေထိုင်ရန်အလို့ငှာ သင်တို့အားလုံးစု
ဝေးကာ လာကြကုန်လော့ သင်တို့၏ ကိုယ်ကို
ငါးမန်းများအား အပ်နှံထားကြကုန်လော့ အို
ရိုဟင်ဂျာ အပေါင်း မသာလောင်းတို့။ ။
"It is an undeniable fact of history that before Muhammed was born, the moon god "al-Ilah" (Allah) had three daughters named al-Lat, al-Uzza and Manat. The first two were even named after their father. Each daughter hadaseparate shrine near Mecca, where Allah's shrine was located."
ကုလားကို ခွေးလိုးမသားလို့ မဆဲကြပါနဲ့ဗျာ
ကုလားတွေ တစ်ကယ်မခံနိူင်လို့ပါ ၀က်သား
လည်းမကျွေးပါနဲ့ ကြိုက်ပါတယ် မစားနဲ့လို့ပိတ်
ပင်ထားလို့ပါ ကုလားမဖင်ကို ရိတ်ထားတာ လည်း မှန်ပါတယ် သောကြာနေ့တိုင်းရိတ်ရပါတယ် ကိုရ်အန်ကျမ်းစာ အတိုင်းပါ ကိုယ့်အမေကိုယ်
ယူတာလဲ တစ်ကယ်ပါ မငြင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဗျာ
အပေါ်က စောက်ရူးမူဆလင်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းတို့ မူဆလင်တွေ ကလွဲလို့ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာက မှ သူများတွရဲ့ဘာသာရေး အဆာက်အအုံတွေ ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖျက်ဆီးပြီး ဗလီမဆောက်ဘူးကွ။
အခု စကားပုံက ပြောင်းသွားပြီ။
မြွေနဲ့ မူဆလင် ၊ မူဆလင်ကို အရင်သတ်တဲ့။
မြွေ ကအသေခံဗုံးမခွဲဘူး။ လူတွေကို လည်လှီးသတ်ရင် နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ မယုံဘူး။
Kill Muslims wherever you find them.
မင်းတို့ ကုအာန်ကျမ်းစာမှာ လို့ ပေါ့ကွာ။
ခွေးလိုးမသား စောက်ကုလား နာမည်တောင်
ဖော်မရေးရဲဘဲနဲ့ မင်းကငါ့ဆီလာအုံးမယ် မင်းမလာနဲ့ မင်းအမေကို လွှတ်လိုက် ဖင်လိုးလွှတ်လိုက်မယ် စောက်ကုလားတွေ မင်း
တို့ တောင်ကုတ်ကို လာရဲလို့လား ကိုယ်မေကိုယ်
ma aye low ka lar dway. ngar low ma ma aye low myo dway. tat ti shi yin 095145545 ko set lite. ma aye low muslim dway. ngar low ma thar dway.
khin hla said...
(နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကကော ငြိမ်နေမလား။ ပါတီကိုထိတာမဟုတ်လို့ ငြိမ်နေကြတာလား။ ဘာအတွက်လုပ်နေကြတာလဲ။ ဘယ်သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတာလဲ။ မင်းတိုအာဏာရရေးသက်သက်လား။)မမေးနဲ့ လေကုန်တယ် နိုင်ငံရေး လုပ်စားတာ
နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဒေါ်စု နိုဗယ်ဆု ရတုန်းက ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ကို ဘယ်မှာသုံးလိုက်လဲ သိလား?
Protest Against the BBC and Anna Jones in New York...
Demonstration on BBC NewsDepartment by Myanmar In ...
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများက BBC မှ အင်နာဂျုံးဝန်ချေ...
နိုင်ငံတော်ဦးသျှောင်တွေ / နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဘာတွေ...
Anti-Rohingha လှုပ်ရှားမှု ထောက်ခံအားပေးသူများနှင်...